कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइराला ओम अस्पतालमा भर्ना - नेपालबहस
कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइराला ओम अस्पतालमा भर्ना
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कोइरालालाई गए रातीदेखि ज्वरो आएपछि चावहिलस्थित ओम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
| ११:०३:१२ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित कोइरालालाई गए रातीदेखि ज्वरो आएपछि चावहिलस्थित ओम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
उनकाे अहिले आइसीयूमा राखेर उपचार थालिएको छ । कोइरालालाई गएराति नै अस्पताल भर्ना गरिएको हो । कोइरालालाई कोभिड विशेष निगरानी कक्षामा राखेर उपचार थालिएको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकहरुले उनमा निमोनिया भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।
नेता शशांकको उपचारमा ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइराला नेतृत्वको टोली खटिएको छ । टोलीमा सिनियर कन्सल्ट्यान्ट पल्मोनोलोजिष्ट डा. सुबोध सागर ढकाल, कन्सल्ट्यान्ट इन्टेन्सिभिष्ट डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ लगायत छन् । पाँच वर्षअघि एस्पिरेशन न्युमोनियाका कारण अचानक अचेत हुँदा पनि डा. कोइरालाको उपचार ओम अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा गरिएको थियो ।
गएको भदौ २३ गते उनमा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता उनी होम आइसोलेसनमा रहँदै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा कोइरालाले सभापति पदमा दाबी गर्दै आएका छन् ।
दमक कांग्रेस उजिल्याउन युवा नेता रिजालको नेतृत्व आवश्यक ४ घण्टा पहिले
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु, पौडेल र सिटौलाबीच छलफल २२ घण्टा पहिले
देउवाको चाल, पौडेलको ढाल ! काम लाग्ला त कांग्रेस बचाउन ? ५ दिन पहिले
देउवाको रोजाईमा अधिवक्ता श्रेष्ठ बने जनसम्पर्क विभागको केन्द्रीय सदस्य ६ दिन पहिले
कांग्रेस आत्मघाती बाटोतिर त छैन् ? ६ दिन पहिले
युवानेता पुरी जनसम्पर्क समितिको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित ६ दिन पहिले
छहरा झरना ३ मिनेट पहिले
डीएसपीसहित ८ जना प्रहरीलाई संक्रमण २० मिनेट पहिले
मोरङमा थप एक सय ३० जनालाई कोरोना २८ मिनेट पहिले
खुल्ला सिमानाका कारण लागु औषधले थप्दै सुरक्षा चुनौती ३२ मिनेट पहिले
नेपालबहसमा प्रकाशित समाचारको प्रभाव:- अल्मलियो थप गर्न खोजिएको डीआईजी दरबन्दी ४५ मिनेट पहिले
विदेशबाट ८० हजार १६ नेपाली स्वदेश फर्किए ४ घण्टा पहिले